Hafa noho ny Safaris Wildlife, dia izao ny fizahan-tany Golf any Afrika Atsinanana
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Tanzania » Hafa noho ny Safaris Wildlife, dia izao ny fizahan-tany Golf any Afrika Atsinanana
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • Sports • Vaovao Mafana Tanzania • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia
Dr. Numbaro sy Andriamatoa Najib Balala momba ny fizahantany golf any Afrika Atsinanana
Tsy ny safariam-biby any Afrika Atsinanana ihany, fa izao ny fizahan-tany ara-panatanjahantena dia hanentana ny fitsangatsanganana an-tsokosoko any amin'ny faritra hisarihana ireo mpizahatany ara-panatanjahantena hanitatra ny fonosana ataon'izy ireo manomboka amin'ny bibidia ka hatrany amin'ny fanatanjahantena ivelan'ny vala fiarovana.
Ny fizahan-tany Golf dia vao natomboka ho toy ny hetsika ara-panatanjahantena fizahan-tany hisarihana mpitsangatsangana ara-panatanjahantena vaovao.
Nihaona tao amin'ny tanànan'ny mpizahatany Avaratra Tanzania ny minisitry ny fizahan-tany Tanzania ary ny sekretera momba ny fizahantany any Kenya any Arusha mba hialana amin'ny fandefasana ny fizahan-tany Golf any Afrika Atsinanana.
Hasiana fonosana manokana ho an'ny fizahantany ara-panatanjahantena hifanaraka amin'ireo mpilalao golf iraisam-pirenena mitsidika an'i Tanzania.
Tanzania sy Kenya, ny toeran-jaza safari roa lehibe atsy Afrika Atsinanana, dia vao avy nanangana ny fizahan-tany Golf ho toy ny hetsika ara-panatanjahantena fizahan-tany isam-paritra izay natao hanintona karazana mpitsangatsangana ara-panatanjahantena vaovao avy amin'ny faritra Community Africa East (EAC) sy ny faritra eto amin'izao tontolo izao. .
Nanaiky ny hampiditra izany ny minisitra ho an'ny fizahan-tany avy amin'ny firenena roa tonta, avy eo hampisondrotra ny fizahan-tany Golf eo amin'ireo fanjakana roa tonta, mikendry ny hisarika ireo mpizahatany ara-panatanjahantena handany ny androny any amin'ny faritra.
Fizahan-tany Golf Mety hahasarika ireo mpilalao golf maneran-tany hitsidika ny faritra avy eo handany ny androny amin'ny fitsinjarana golf any Tanzania Avaratra sy Kenya.
Najib Balala mitazona baolina
Ny minisitry ny fizahantany any Tanzania, Dr. Damas Ndumbaro, ary ny sekretera momba ny fizahantany any Kenya, Andriamatoa Najib Balala, dia nihaona tao amin'ny tanànan'ny mpizahatany Avaratra ao Arusha mba hialana amin'ny fandefasana ny fizahan-tany Golf any Afrika Atsinanana.
Ankehitriny, ny fizahan-tany Golf dia tsy ho ela dia ho lasa mahasarika hafa na vokatra fizahan-tany mba hisarihana ireo mpitsidika isam-paritra sy iraisam-pirenena, izay hanambatra ny làlana fitsidihany avy amin'ny safaris dia sy ny fialantsasatra amoron-dranomasina ka hatramin'ny golf.
Hasiana fonosana manokana ho an'ny fizahantany ara-panatanjahantena hifanaraka amin'ireo mpilalao golf iraisam-pirenena mitsidika an'i Tanzania. Natoky ny filohan'ny Vondrona Golf Tanzania Golf (TGU), Chris Martin ary nilaza fa mila manorina taranja golf i Tanzania mba hisarihana ireo mpilalao iraisam-pirenena sy mpizahatany.
Mpilalao golf 140 eo ho eo avy any amin'ny firenena 13 ao Etazonia, Aostralia, Canada, Belzika, Netherlands, England, China, Kenya, India, Zimbabwe, South Africa, Uganda, ary mpampiantrano Tanzania no nibolisatra tamin'ny hetsika fizahan-tany "Kili Golf" voalohany.
Ny fizahantany ara-panatanjahantena dia tsy tao anatin'ny fampielezan-kevitra fitetezam-paritra tany Tanzania, ary ny fandefasana ny fizahan-tany Golf dia hahasarika fandaniana bebe kokoa amin'izay hanampian'ny mpizahatany andro maro hijanonana ao Tanzania hankafizan'ny golf teeing.
Golf dia iray amin'ireo fanatanjahantena mahasarika mpizahatany marobe ary niteraka 20 tapitrisa dolara mahery isan-taona amin'ny sehatra manerantany.
Nanomboka tamin'io fotoana io no nanapa-kevitra i Tanzania fa hiroso amin'ny varotra fizahan-tany amin'ny alàlan'ny lalao golf.
Ny tanàna Arusha dia teboka fanombohana ho an'ireo mpizahatany voavidy ao amin'ny valan-javaboary Safari Avaratry Tarangire, Lake Manyara, Ngorongoro, ary Serengeti.
Mikendry ny hivarotra ny faritra Afrika Atsinanana ho toeran-tokana fizahan-tany, ny minisitry ny fizahan-tany ary ny tompon'andraikitra amin'ny faritra protokolon'ny fanjakana 6 dia samy nanaiky ny hanangana ny EAC Regional Tour Expo (EARTE) isan-taona miaraka amin'ny tanjona hanatsara ny fahitana ny faritra sy ny marketing. io ho toerana fizahan-tany tokana.
Ireo fanjakana afrikanina atsinanana dia hanao fampirantiana fizahan-tany lehibe amin'ny faran'ny herinandro ho avy izao ao Arusha, tanàna safari any Tanzania Avaratra. Izy io no fampirantiana fizahan-tany voalohany sy lehibe tanterahina atsy Afrika Atsinanana.
Ny fampirantiana dia nahasarika mpandray anjara avy amin'ny firenena mpikambana ao Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, ary South Sudan mba hampiseho ireo toerana fizahan-tany ataon'izy ireo eo ambanin'ny elo fampidirana rezionaly amin'ny fizahantany.
Tanzania sy Kenya dia nanohana hetsika maimaimpoana ho an'ny dia rezionaly sy iraisam-pirenena taorian'ny nifanarahan'ny filoha avy amin'ny fanjakana roa mifanakaiky hanatsara ny dia sy fivezivezena an'ny olona.
Ny bloc afrika atsinanana izao dia mijoro ho ohatra tsara amin'ny fampandrosoana ny fizahantany isam-paritra eo ambanin'ny sehatra tokana izay anaovan'ny Birao Fizahan-tany Afrikanina fizarana ezaka ho fampandrosoana manerana ny kaontinanta.